Social Networking uye Yako Yekutengesa Ratidza | Martech Zone
Social Networking uye Yako Yekutengesa Ratidza
Chipiri, Gunyana 11, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Dai iwe ukave nemukana wekuteerera kubvunzurudzo yedu naCrystal Grave we Kubvuta, unoziva isu tinotenda zvakadii varongi vezviitiko. Pamwe hapana basa rakaomarara mukushambadzira nekuti vashambadzi vezviitiko vakakura vanoshanda zvisina mushe mumatanho pamwe nekushanda pane dzakaomesesa-nguva uye kuuraya. Iwe hautore mukana wechipiri nechiitiko - iwe unofanirwa kuzvigona kekutanga.
Zviitiko inzira huru yekubatana nevanotarisira vatengi, vashambadziro, vashandi vatsva uye vane hunyanzvi muindasitiri yako. Dzidza maitiro ekushandisa enhau enhau kuti uwane zvakanakisa nekupinda pakuratidzwa kwako kunotevera.
Maodzanyemba Akadziva kumadokero Kufananidzira yaisa pamwechete iyi infographic pasocial network uye neako tradeshow. Maodzanyemba akadziva kumadokero Kwekufungidzira anopa anonyanya kufarirwa emabhizimusi ekuratidzira matumba, ekuratidzira showa, uye hombe fomati yekudhinda pamitengo inodhura.
Chii Chinoshanda Kugoverana Kwemagariro
Vhidhiyo: Youtube Vhidhiyo Shanduko 2.0